Maalinta: Ogast 28, 2019
BCCI, 'Strong Turkey' in ay u guuraan Intelligence Wadajirka Sii
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO), borotokoolka magaalada Erzincan iyo Corlu waxay martigeliyeen wakiilo ganacsi. Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa ayaa saxiixday borotokool walaaltinnimo Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Erzincan, Marmara [More ...]
Waxqabadka Tacliinta ee East Express
27-31, sagaalaad ee Kamp Accounting Thought Camp geleneksel, oo dhaqan ahaan ay habeeyeen xubnayaasha Xisaabaadka Kulliyadda Sayniska iyo Isku-duwaha Solidarity (MÖDAV) sanad kasta, ayaa lagu qabtaa Kars bisha Agoosto. Xubnaha Xisaabaadka Kuliyada Sayniska iyo [More ...]
Iibinta Gawaarida ayaa ka bilaabatay Hepsiburada
keentay boosteejo e-commerce Turkey ee Hepsiburada, ayaa ku dhawaaqay olole dhoolla caddayn doonaa Wajiyada kuwa doonaya in ay gaariga ku qaataan. 28 Fiat Egea Sedan Easy 10.00 Dabka 1.4 gaaska HP iyo [More ...]
CHP Gurer, Mashruuca Wadada weyn ee Nigde Ankara ayaa la weydiiyay, Wasiirka ayaa ka Jawaabay
Kuxigeenka CHP Niğde Ömer Fethi Gürer oo uu hogaaminayo mashruuca wadooyinka Niğde-Ankara oo ka jawaabaya soo jeedinta qoraalka ee su’aalaha, Cahit Turhan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha ayaa yimid. Ku-xigeenka CHP Niğde Fmer Fethi Gürer, ka jawaab [More ...]
Plaram Plant si loo Iibsado Wadayaasha 65
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir waxay ku dhawaaqday iibsiga darawalada 65.Waxaad ka baran kartaa wararkayaga ku saabsan shuruudaha iibsashada iyo shuruudaha dalabka. Nidaamyada Tareenka ee Estram Light ee degmada Eskişehir ee ogeysiisyada cusub ee lagu daabacay İŞKUR [More ...]
Nexans Turkey, July 10 2019, gacanta-qaadeen in iskaashi korontada barnaamijka seminar ah qaybiyaha ugu weyn ee ah; Nidaamka casriga ee 'MOBIWAY', nidaamka gudbinta iyo caanaha ayaa la wadaagay kaqeybgalayaasha. Ururka waxaa ka soo qeybgalay marti sharaf u dhow 40, [More ...]
Cafis ma leh Doomaha Doodaya Badda ku daadata Antalya Bay
Waaxda Antalya Metropolitan waaxeedkeeda waaxda caafimadka deegaanka, wasakhda badda waxaa sababay wadar ahaan labo biyood 35 kun 176 rodol oo ganaax ah ayaa dalbaday ganaax. Xakameynta Ilaalinta Deegaanka ee Dawlada Hoose [More ...]
Ardayda Dugsiga barbaarinta waxay ku baaqayaan Xasiloonida İZBAN
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir İZELMAN Ardayda xanaanada waxay diyaariyeen aragtidooda gaarka ah sida ay u doonayaan dabeecadda ayaa u sheegay odayaasha ku safraya İZBAN. Dawlada Hoose ee Magaalada Metrozmir İZELMAN Ardayda xanaanada ayaa la yaab ku noqotay rakaabkii la socday İZBAN [More ...]
Dhibanayaal Channel Istanbul: 'Lacag bixin ayaa la sameyn doonaa haddii go'aanka aaggaga!'
Maxay yihiin ugu dambeeyay ee mashruuca ugu weyn ee Turkiga in la hammuun si aad u dabasocon mashruuca Channel Istanbul? Marka qandaraaska Kanal Istanbul la qaban doono, ayaa la qaban doonaa Channel Istanbul, mashruuca waa la burin doonaa [More ...]
Tareenka Xawaare Sare leh ee Dib loogu Soo nooleeyo Dalxiiska Sivas
Duqa magaalada Sivas Hilmi Bilgin wuxuu indho indhayn ku sameeyay goobta dhismaha ee Mashruuca Kale, oo qiimo u kordhin doonta Sivas, isla markaana helay macluumaad ku saabsan shaqooyinka sida muuqata loo qabtay. Mashruuca Kale ee Iskuxirka Masaajidka Ulu iyo Gök Madrasa [More ...]
Qeexida Mansur Yavaş's Esenboğa Metro
Sharraxaadda Mandour ee 'Mansur Yavaş' ee Esenboğa Metro Sharaxaad: Ka hadlida kulanka lagu qabtay Degmadda Ankara, Mansur Yavaş, Ankara Esenboğa Airport si loo fududeeyo gaadiid ka yimaada bartamaha magaalada ayaa bayaan ka soo saaray mashruuca metrooga. Intii lagu gudajiray howlaha doorashada, garoonka diyaaradaha Esenbo Ea [More ...]
Xakameynta Mashiinka ee Teknolojiyadda Raadiyaha
Xakameynta mashiinka leh teknolojiyadda raadiyaha ee loo adeegsado gawaarida ka baxsan wadada, mashiinada dhismaha iyo sawir-qaadista ayaa ka hortagaysa khaladaadka waxayna hubisaa in shaqooyinka lagu qabto hal go aan oo sax ah. Mashiinada saxda ah ee ku saleysan nidaamyada GNSS iyo moodooyinka naqshada 3B [More ...]
Qiimaha Tiknoolajiyada TCDD Tareenka Xawaaraha Sare
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) ee khadadka hawlgalka ee TCDD General Directorate of Gaadiidka Inc Qiimaha tikidhada Tareenada Xawaaraha Sare ku shaqeeya. tareenada-xawaaraha sare ee hadda Istanbul ee Turkey Eskisehir - Ankara iyo Konya [More ...]
Turkey Point in Service kasta Service kombaresarada 7 / 24
La shaqaynta kooxaha khubarada ah ee dayactirka iyo adeegga kombuyuutareedka loo adeegsado meel kasta oo wax soo saar ah waxaay yareysaa culeyska shirkadaha. kooxda khubarada ee uu mar uun kasta oo adeegid Turkey 7 / 24 bixiya adeegyo dhamaystiran oo dhamaan Iron komberesarrada [More ...]